T+T:- Al-waaxa iyo Xamdaan Secondary oo barbar dhac galay iyo Mubaarak dhahar oo guuleystay – Radio Daljir
Luulyo 16, 2013 6:25 b 0
Boosaaso, July 16- 2013 – Tartanka bisha Rammadaan ay qabato Radio Daljir ee loo yaqaan Tartan iyo Tacliin ayaa idaacada ka socda habeenkii Afraad, iyado tartankii habeenimadii xalayto ahayd ay isku arkeen afar iskuul, ?labbadii wakhti ee tartanka xalayto.
Qeybtii kowaad ee tartanka xalayto waxaa fooda is daray iskuulada sare ee Al-waxa Garoowe iyo iyo Xamdaan Secondary oo Bosaso ku yaala, waxaana tartanka qeybtii hore oo ahaa mid xamaasad badan uu ku soo dhamaaday bar bar dhac markii ay ka jawaabeen su?aalihii la siiyey.
? Iskuulka Al-waxa wuxuu helay sagaal dhibcood, wuxuu ka jawaabay Afar ka mid ah su?aalihii la weydiiyey, sidoo kale waxay ka faa?iideysteen hal soo dhaaftay Xamdaan, sidoo kale Xamdaan waxay ka jawaabeen 4 su?aalood, sidoo kale waxay ka faa?iideysteen hal ka faa?iideysi oo soo dhaafay Al-waxa? ayuu yiri Guddiga barnaamijka.
Docda kale tartankii habeenimadii xalayto ahayd waxaa is arkay ?labbada iskuul ee Mubtada oo Burtiinle ku yaala, iyo Mubaarak Secondary oo ku yaala magaalada Dhahar ee xaruunta Gobolka Hayland.
? Mubtada Buurtinle waxay heleen 10 derajo, sidoo kale Mubaarak wuxuu lahaa lix su?aalood weyna ka jawaabeen dhamaan su?aalihii laweydiiyey, waxaana guuleystey Mubaarak oo Dhahar ka socday? ayuu yiri Guddiga Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee Radio Daljir.
Tartan iyo Tacliin ayaa weli ka socda idaacada Radio Daljir, waxaana caawa is arkaya Al-nuur oo Baran ku yaala iyo Nugal Secondery oo Garoowe ku yaala, sidoo kale qeybta dambe waxaa tartamaya caawa Al-nawawi secondary oo Qardho ku yaala, iyo Al-najax oo Bosaso ku yaala.
Khasaaraha ka dhashay weeraro shalay ka dhacay magaalada Basra ee dalka Ciraaq oo sii kordhaya